Horohorontany mafy no namely an'i Puerto Rico
Home » Fiarovan-tena amin'ny loza sy loza » Horohorontany mafy no namely an'i Puerto Rico
Nisy horohoron-tany mahery vaika 5.5 nanetsiketsika ny faritanin'i Etazonia tsy misy orinasa Puerto Rico amin'izao fotoana izao. Nanaraka ny horohoron-tany ny horohoron-tany maro.
Araka ny USGS, ny horohoron-tany voalohany dia voarakitra 11 km miala an'i Tallaboa, vondrom-piarahamonina kely any atsimon'ny nosy. Nisy andiana hetsika fampitahorana tsy dia matanjaka tao amin'ilay faritra narahina tao anatin'ny adiny iray.
Nisy ny fahasimbana nitranga teny an-toerana. Lahatsary voalaza fa notifirina taorian'ny horohoron-tany dia nahitana tranobe simba.
Ny sary hafa dia mampiseho vato avy amin'ny fihotsahan'ny tany izay mandefa vovoka amin'ny rahona amin'ny arabe tsy lavitra.
Saripika avy any amin'ny seranan'i Ponce, izay manodidina ny 10km atsinanan'ny Tallaboa, no nampiseho ny arabe feno korontam-bato tamina tranobe simba.
Ny horohoron-tany koa dia niteraka fahasimbana tamin'ny tariby nampifandray an'i Ponce sy Penuelas tany andrefana, ka niteraka fahatapahana izany, hoy ny tompon'andraikitra angovo ao an-toerana. Ny tsy fetezana dia efa namboarina.
Ny horohoron-tany sabotsy no farany tamin'ny andiany iray izay niantraika tamin'i Puerto Rico hatramin'ny desambra 2019, namono sy nandratra olona marobe ary nanosika ny governora hanambara fa misy fepetra vonjy taitra taorian'ny horakoraka 6.4 tamin'ny Janoary.
Ireto firenena manaraka ireto koa dia voan'ny horohoron-tany: Nosy Virgin British, Dominica, Saint Martin, Sint Maarten, Guadeloupe, Montserrat, Puerto Rico, Saint Kitts ary Nevis, US Virgin Islands, Caribbean Netherlands, Saint Barthélemy, Antigua ary Barbuda, ary Anguilla .
Horohoron-tany lehibe no nitoraka ny nosy fizahan-tany grika any Kreta
Tsy voaro amin'ny Coronavirus ve i Cape Town any Afrika Atsimo?